Life Style : यस्तो पनि…! | Screennepal
Life Style : यस्तो पनि…!
२०७४, ३ कार्तिक शुक्रबारscreennepalfeature, Offbeat0
जर्मनी, ४ कार्तिक (एजेन्सी) । यूरोपमा सेक्स डल प्रति आकर्षण बढ्दै गएपछि जर्मनीको ड्रोटमोण्डमा पहिलो सेक्स डल बेश्यालय संचालनमा आएको छ ।
२९ बर्षिया इभेन्लि स्वार्जले संचालनमा ल्याएको यो बेश्यालयमा उनले ११ वटा सिलिकनवाट निर्मित सेक्स डलहरुलाई राखेकी छिन् । जसको कारण उनले आफुले संचालन गरेको बेश्यालयको नाम बोरडल राखेकी छिन् ।
एशियाली लुक्स रहेको सेक्स डलहरुलाई उनले एशियावाटै मगाएकी हुन् । स्वार्जका अनुसार औसत रुपमा एउटा सेक्स डलको मुल्य २ लाख ४४ परेको छ । उनले यि सबै सेक्स डलहरुको नामाकरण आफ्नै किसिमले राखेकी छिन् । सेक्स डलको उचाई, वनावट, स्तनको आकार, आँखा र कपालमा विविधता रहेको छ ।
उनले राखेको सेक्स डलहरु मध्ये जापानीज् एनिमेसनको एक क्यारेक्टरको रुपमा रहेको निलो कपाल भएकी सेक्स डलको माग अत्याधिक रहेको छ । उनका अनुसार अहिले उक्त सेक्स डलसंग शारीरिक सम्बन्ध राख्न दैनिक १२ पटकसम्म बुकिङ हुने गरेको छ । १ घन्टाका लागि एक पटकका लागि बुकिङ गर्दा ग्राहकले करिब १० हजार रुपैंया तिर्ने गरेका छन् ।
उनले संचालनमा ल्याएको सेक्स डल बेश्यालयमा धेरै मानिसहरु कौतुहलता मेट्न पहिलो पटक आउने गरेका छन् । यसमा केबल जर्मनमात्र नरहेर अन्य मुलुकका पनि हुने गरेका छन् । सबै पेशाका पुरुषहरु आउने र कोही कोही दोहोर्‍याएर समेत आउने गरेका छन् । उनको अनुभवमा उनको बेश्यालयमा सर्वाधिक लोकप्रिय मानिएको एन्ना सेक्स डललाई एक ग्राहकले उत्तेजनामा भाँचिदिए ।
Previous Post‘पसले’ बन्दै Next Postपत्याउनै गाह्रो एक दर्दनाक प्रेमकथा... !